Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland Oo Dhambaal hambalyo ah u diray shaqaalaha Miino saarka dalka | Salaan Media
Madaxweyne ku xigeenka JSL, Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) waxa uu hambalyo u dirayaa dhamaan shaqaalaha miinada iyo walxaha qarxa Maalinta miinada oo ku beegan 4 April 2013 awgeed.
Sidaad la socotaan maanta waa 4th April 2013, waana maalinta miinada aduunka iyo wacyigelinteeda sidaa darteed marka hore waxaan hambalyeeynayaa dhamaan shaqaalaha miinada iyo walxaha qarxa ku howlan sifeynta miinada ee ka shaqeeye dhamaan gobolada dalka.
Hambalyayaa ka dib sidaad la socotaan Marxalado kala duwan ayey Somaliland soo martay iyada oo la tacaaleysa dhibaatada ay miinadu ku haysay nolosha iyo horumarka Somaliland.
Maanta waxaa ah wax lagu faano sida habsamida leh ee ay hawlaha wax-kaqabadka miinadda ay u socdaan kuwaa oo ay gacanta ku hayaan hay’addaha kala ah SMAC, HALO Trust, POlice EOD, NDA , DDG iyo Olive group oo iyana horkacaya shirkada shidaalka ee (Genel energy) oo runtii si xowli ah u wada hawlaha waxka qabadka miinada iyo walxaha qarxa.
Siyaasada dowladda Somaliland waa in la dhiiri geliyaa wax ka qabadka miinada iyo walxaha qarxa si loogu talaabsado horumar deg-deg ah uguna dhiiradaan muwaadiniinta iyo ajaanibka daneynaya in ay maalgashadaan Somaliland.
Waxaan dhamaan bulshaweynta Somaliland uga digayaa xilgan roobabka in ay aad uga taxadiraan miinada iyo walxaha qarxa oo laga yaabo in ay soo saaraan daadku ama soo qaadaan dooxyadu iyaga oo ka soo qaadaya meel ay hore ugu aasneyd keenayana meel kale, haddii ay arkaan waxaanay garaneyn hala xiriiraan hay’addaha ku howlan miinada ama saldhig police halka ugu dhow.
Waxaan ugu baaqayaa dhamaan hay’addaha aan soo sheegay in ay kordhiyaan ama laban-laabaan shaqadooda si aan deg-deg u soo gaba-gabeeyno Hawlahaa miinada si aan u dhiirigelino horumarkan xawliga ku socdaa ee wadankeena Somaliland.
waxaan kaloo soo dhoweynaynaa hay’ad kastoo caalami ah oo wax nagala qaban kareysa howlahaa miinada iyo walxaha qarxa si xilli dhow u soo gebogabeyno Miinada dalka ku jirta